Izindawo ze-Casino eziku-inthanethi zase-Finnish - Amakhodi Amabhonasi E-inthanethi Ase-inthanethi
(753 amavoti, isilinganiso: 4.00 out of 5)
Ngokungafani ne-Arab Emirates nakwamanye amazwe amaningi, eFinland ukuphathwa kwezokugembula kuyinto eyingqayizivele yombuso. Imali etholwe kumalotho, imishini yokudlala kanye namakhasino, iya ngezidingo zomphakathi nokupha.
Okwanamuhla eFinland kunekhasino elilodwa kuphela langempela - iGrand Casino Helsinki (Grand Casino Helsinki). Lesi sikhungo sokugembula sisenkabeni yenhlokodolobha yaseFinland, emgwaqweni uMikonkatu. Ungafika lapho cishe nganoma yiluphi uhlobo lwezokuthutha.
IGrand Casino Helsinki itholakala esakhiweni esisanda kwakhiwa kabusha esivela ekuqaleni kwekhulu lama-20. Indawo yayo ephelele ingu-2500 m2. Lesi sikhala sisingatha imishini engama-slot engaphezu kwamakhulu amathathu, iklabhu ye-poker namatafula angama-20 eminye imidlalo (i-roulette, iBlack Jack, iTexas Hold'em, iPunto Banco), amabha amathathu nezindawo zokudlela ezimbili.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zesiFinnish Online Casino
Ikhasino livula iminyango yalo nsuku zonke ngo-12: 00. Kodwa-ke, amatafula wamakhadi “bukhoma” aqala ukusebenza ngo-13: 30 kuphela. Kuze kube manje, abadlali batholakala kuphela abaphangi ababanjwa ngesandla esisodwa, amatafula e-poker kagesi kanye ne-roulette TouchBet. Ukungena kukhululekile ngokusemthethweni, kepha izinsizakalo zekhabethe zizokubiza ngo- € 2. By the way, ukubheja okuncane ekhasino kufana ncamashi nenani elifanayo.
Ku-casino abantu abangaphansi kweminyaka ye-18 akufanele kuthiwa, futhi nabakwa-comrades abagqoke izigqoko zezemidlalo futhi banganikezi izingubo zangaphandle ezigqoke izingubo zokugqoka. Kumele kuqashelwe ukuthi ukulawula ubuso e-Grand Casino Helsinki kunokwethenjelwa kakhulu futhi kuzolile nge-jeans, kodwa akuphuthelwa yizintambo ezingenasibindi.
Manje amazwi ambalwa ngemali. Ku-Grand Casino Helsinki, zonke izibalo zenziwa kuphela nge-euro. Amabhara kanye nezindawo zokudlela zamukela ukukhokha kokubili amakhadi nokheshi, kodwa kuma-casino chips ashintshwe kuphela kuma ruble aseYurophu. Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi kuzodingeka uye esikhungweni esinamapokethi agcwele amabhange. Ungakwazi ukuza kalula ngekhadi lepulasitiki bese uhoxisa imali edingekayo yemali ku-ATM yendawo, esekelwe eduze kwedeski lokuthola.
Njengoba kushiwo ngenhla, iGrand Helsinki Casino akuyona nje ihholo lokugembula. Emabhawa nasezitolo zokudlela ungadla kahle, ubuke ukusakazwa kwethelevishini kwemincintiswano yezemidlalo futhi ulalele umculo ophilayo. Ngaphezu kwalokho, indawo yokudlela i-Fennia Salon ihlala isingethe izinhlelo, ezihanjelwa amaqembu odumo nokuthandwa okuhlukahlukene. Intengo yethikithi le- “show + dinner” isukela ku-50 kuye ku-100 €.
Amakhasino nesikebhe Ngaphezu kwekhasino enkulu enkulu, eFinland kunamanye amahholo amancane emidlalo amaningi "iPotti" kanye nenethiwekhi yamakilabhu amaklabhu "Club RAY". Kowokuqala awekho amatafula wamakhadi wangempela, futhi amanani awakwazi ukudlula ama-20 €. Amakilabhu "Potti", njengomthetho, atholakala ezitolo zezitolo futhi anohlelo lomsebenzi olufanayo. Ku- "Club RAY", kunemikhawulo yamanani, kepha ayinayo imishini kuphela, kodwa futhi namatafula wamakhadi "aphilayo". Amakilabhu amakhulu kunawo wonke ale nethiwekhi atholakala eJyväskylä (Kauppakatu 41) naseTurku (Eerikinkatu 10).
Futhi ngokusemthethweni iFinland iphethe "amakhasino ezintantayo" amaningana. Lezi izikebhe ezincane ezifakwe amatafula okudlala i-roulette, i-poker ne-blackjack. Bavele ngokushesha ngemuva kokuvinjelwa kwamakhasino eRussia, futhi baboshwa eSt. Petersburg, kepha umdlalo uqala kuphela emanzini angathathi hlangothi noma aseFinland.
Ngaphezu kwalokho, ama-finns angamahle afuna ukuvula enye ikasino enkulu e-Eastern Finland, eduze nomngcele waseFinland-waseRussia. Ukuvula kuhlelelwe i-2015.
Namuhla, siqhubeka nesiko lethu lokujikeleza iYurophu. Sesivakashele ePrague, eTallinn, eMinsk, eWarsaw, eVilnius naseRiga. Ngalesi sikhathi amaCasinoToplists akumema ukuthi uvakashele izwe elihle elisenyakatho neYurophu, elinemifula namachibi amaningi - eFinland. Sifunda okuningi okuthakazelisayo njengezwe uqobo, kanye nokugembula. Ngakho-ke uhambo lwethu olubonakalayo luyaqala!
I-Finland - i-geography nomlando omncane;
AmaKhasiyinti asekelwe ezweni okwamanje: ukuzibusa kombuso;
Amakhasino adume kakhulu - «Grand Casino Helsinki»;
Izindawo ezinhlanu e-Finland capital capital Helsinki ngamakheli;
Amaqiniso anentshisekelo mayelana neFinn neFinland.
Umlando omfushane weFinland
Izindawo zokuqala ezisezweni laseFinland zanamuhla ziye zavela phakathi ne-Ice Age, ephathelene ne-8,500 iminyaka BC.
Umlando walo mbuso uxhunyaniswe ngokungenakuhlukaniswa nomakhelwane bawo: iSweden neRussia. Emakhulwini amaningi eminyaka iFinland yabuswa yiSweden, ngoSepthemba 5, 1809 iSweden yaphoqeleka ukuba isayine isivumelwano sokuthula no-Alexander I.
Kusukela lapho iFinland yayihlanganiswe neRussia. Kepha hhayi isikhathi eside - sekusayinwe isimemezelo sokuzibusa ngoDisemba 4, 1917.
Ukugembula eFinland akuvunyelwe, kepha kulawulwa umbuso. Lokhu kusho ukuthi yonke imali etholakala ngokugembula iyisabelomali sezwe esiza abantulayo, kanye nasezinhlelweni zezempilo nezenhlalo.
Kukhona lokho okubizwa ngokuthi yi-Association RAY (i-playing machines Association) - ukuthi ingeyekhasino kuphela kuleli kanye nayo yonke imishini yokubheja.
Ekugcineni, yonke imali evela ekugembuleni iqoqwa futhi isatshalaliswe ikomidi elikhethekile ngezinga lama-70% ezidingo zazo zonke izinhlobo zezinhlangano ezisiza umphakathi ("Union of Disabled", "Union of Orphans" nezinye izinhlangano), ngenkathi U-30% usetshenziselwa ukugcinwa kwezisebenzi zokugembula nezemiholo.
Ngaphezu kwalokho, ihlolwe izakhamizi: ungafika ekhasino kuphela lapho ufinyelela eminyakeni engu-18 ubudala. Futhi yebo, zilungiselele ukuthi ukuvakasha kokuqala ucelwa ipasipoti nesithombe - udinga ukuhlanganisa i- "Player Card Player" yakho.
Ikhodi yokugqoka intando yeningi impela - ungagqoka yonke into ngaphandle kwamasudi namateku. Kepha izingubo ozocelwa ukuthi uzinikeze ikhabethe.
Ibizwa ngokuthi izwe elikhulu lekhasino «Grand Casino Helsinki» . Itholakala enhlokodolobha yaseFinland, esakhiweni esidala esisanda kulungiswa amahhotela e-palas- «Fennia» («Fenniya”) eMikonkatu 19. Ikhasino livuliwe kusuka ngo-12.00 kuye ku-04.00.
Lapha, abalandeli badlala imidlalo yamakhasino enhlanhla anikela nge-roulette yaseMelika, iBaccarat, iBlack Jack, iRed-Dog, i-Oasis Poker.
Uma ukhetha imishini yama-slot, phakathi kwezinketho ezingama-300 ngokuqinisekile uzozitholela okuthile abakuthandayo. I-Derby Horse ethandwa kakhulu, i-Touch Bet Roulette ne-Lightning Poker.
Abathandi bemidlalo yamakhadi bazokwazi ukuthola inkampani eTexas Hold'em, Omaha nakwezinye izinhlobo ze-poker. Isingatha imiqhudelwano yamasonto onke kanye nempelasonto yanyanga zonke yomqhudelwano nemiqhudelwano yamazwe ngamazwe ye-poker, izikhathi ezi-2 ngonyaka.
Uyacelwa uqaphele - ikhasino ingakhokha kuphela ngokheshi, kepha endaweni yokudlela, ikhadi lakho lesikweletu lifanelekile njengendlela yokukhokha. Imali yamanje - i-euro.
Abaningi abafisa ukudlala ukugibela lapha besuka eSt. Noma kunjalo, indlela ngemoto ithatha cishe amahora ama-3-6 (kuya ngomngcele). Isitimela “i-Allegro” esivela eSt. Petersburg sikusheshisela lapha ngokushesha okukhulu - ngo-3: 00 nje. Ngaphezu kwalokho, ukuthola i-visa yaseFinland kungabi lula.
Senate Square (Senaatintori) kanye nendawo yedolobha. Maphakathi nesikwele kunetshe lesikhumbuzo lika-Alexander II, ngoba lixhumene nobuntu bakhe ekuqaleni kobukhosi bezwe. Kukhona ne-Cathedral enkulu, iNational Library kanye ne-Presidential Palace. Eduzane kuneFektri yamasiko Korjaamo, Nazi izithombe - nemibukiso yobuciko kanye nama-trams atholakala emnyuziyamu.
Winter Garden. Ikheli: Hammarskjöldintie, 1A. Lokhu kumboze zonke izinhlobo zezitshalo ezishisa izimbali nezimbali ezakhiwe ngekhulu le-19, uMajor General Jakob Lindfors. Nguye owayefuna ukuthi ukungena kungene mahhala lapha, kukhululekile kubo bonke abafikayo - leli siko lisaqhubeka kuze kube namuhla. Zingaphezu kwama-200 izitshalo ezivela emhlabeni wonke ezibuthene lapha emahholo e-thematic futhi zimangaza wonke umuntu unyaka wonke. Usuku lokuphumula - ngoMsombuluko. Amahora okusebenza - kuze kube ngu-15.00, ngezimpelasonto - kuze kufike ku-16.00.
I-zoo eHelsinki. Ikheli: Helsinki I-Zoo ke Mustikkamaanpolku , 12 . Yi “Zoo Helsinki Zoo” esiqhingini esinegama elifanayo. Ithinta inqwaba yezilwane (ezingaba ngu-200) nezitshalo (ezizungeze i-1000) ezivela emhlabeni wonke. Cishe, lapha imelwe yimodeli yonke yomhlaba, enezakhamuzi zayo eziphilayo. Ehlobo lapha kungafinyelelwa ngesikebhe.
Sea World « Sea Ukuphila ». Ikheli: Tivolitie 10. Le aquarium ngesimo somhubhe, ozohamba ngezinhlobonhlobo zempilo yasolwandle ngaphezu kwakho. Yimnyuziyamu yempilo yasolwandle eLinnanmäki, ehlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-250. amamitha futhi kufaka ama-50 aquariums.
Amaqiniso anentshisekelo mayelana neFinland ne-Finns
Izwe linesilimi ezimbili ezisemthethweni: isiFinnish nesiSweden;
IFinland ibuye ibizwa nge- "Suomi", okusho ukuthi "umhlaba wezimbokodo". Kukhona amachibi angaba yi-189.000 neziqhingi eziyi-179.500;
Abantu abayizigidi ezi-5 ezweni abakhe ama-sauna angaphezu kwezigidi ezimbili, ngomunye wemisebenzi eyintandokazi yabantu baseFinland. Kukhona nohlobo oluthile lwehlaya, “UFinn angaphila ngaphandle kwe-sauna. Kepha hhayi isikhathi eside. "
Izinhlawulo zezimoto zomgwaqo zibalwa ngokuya kwezinga lemali engenayo umenzi wobugebengu: ngaphezulu kweholo engenayo, ngaphezulu kuyodingeka akhokhe;
Izinsuku ezingama-73 eningizimu yeFinland zigcine i- “White Nights” - ilanga alishoni ngalesi sikhathi;
I-Finns i-patriots ezinhle ezweni lakubo, kungenzeka ukuthi izothenga imikhiqizo yasekhaya ebiza kakhulu kunezingenisa ezishibhile;
I-Finns iyaziqhenya ngemikhiqizo yabo yobisi futhi iyakuthanda amajikijolo;
USanta Claus obizwa ngeFinnish Joulupukki, futhi unomfazi uJoullumuori (okusho ukuthi uKhisimusi endala);
Ulimi lwesiFinnish luyinkimbinkimbi kakhulu, amacala e-14 asebenzayo namacala amaningi e-2, okubhekwa njengengasebenzi.
Finland ebalazweni laseYurophu
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zesiFinnish Online Casino
1 Ukugembula eFinland
1.0.1 Umlando omfushane weFinland
1.1.1 Helsinki ezikhangayo
1.1.2 Amaqiniso anentshisekelo mayelana neFinland ne-Finns
1.1.3 Finland ebalazweni laseYurophu
bella vegas awekho amakhodi wediphozithi wediphozi